ဥပ္ပလရတနာ - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၀ ခုနှစ်က မင်းသမီး
(1951-04-05) ၅ ဧပြီ၊ ၁၉၅၁ (အသက် ၇၀)
ဥပ္ပလရတနာ (ပါဠိ: Uppalaratana) သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ​တော်ဝင်မိသားစုဝင်ဖြစ်ကာ မင်းသမီး​ဟောင်းတစ်ပါးဖြစ်ကာ နိုင်ငံ​ရေးသမားတစ်​ယောက်ဖြစ်သည်။သူသည် ဘူမိဗလဘုရင်နှင့် မိဖုရားသီရိ​ခေတ်တို့၏ သမီးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
၁၉၇၂ခုနှစ်တွင် သူ၏​တော်ဝင်ဂုဏ်ပုဒ်များကို စွန့်လွှတ်ကာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့်အတူ အ​မေရိကန်တွင် အ​ခြေချ​နေထိုင်ခဲ့သည်။သို့​သော် ၁၉၉၈ခုနှစ်တွင် ကွာရှင်းခဲ့သည်။ကွာရှင်းပြီး​နောက် ​တော်ဝင်ဂုဏ်ပုဒ်များနှင့်​ဝတ္တရားများ ပြန်လည် စတင်ခဲ့သည်။ 
ကွာရှင်းအပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မကြာခဏပြန်လာပြီး ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် အမြဲတမ်းပြန်လည်​နေထိုင်ခဲ့သည်။ပြန်​​ရောက်​ရောက်ခြင်းတွင် အခမ်းအနား​ပေါင်းများစွာတက်​ရောက်ခြင်းဖြင့် ​တော်ဝင်ဝတ္တရားများကို ပြန်လည်​ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုင်းပြည်သူများ၏ အရည်အ​သွေးကို မြှင့်တင်​ပေးမည့် ကုသိုလ်ဖြစ်​ဖောင်​ဒေးရှင်းများကို စတင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လတွင်ကျင်းပမည့် ထိုင်းနိုင်ငံ​ရွေး​ကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်အ​ရွေးခံမည့်သူဖြစ်သည်။ 
ဖိုင်:Vajiralongkorn and Ubolrat in 1954.jpg
ဥပ္ပလရတနာမင်းသမီးမှာ ဘုရင်ဘူမိဗလနှင့်မိဖုရားသီရိ​ခေတ်တို့မှ ၁၉၅၁ခုနှစ် ဧပြီ၁ရက်​နေ့တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် ဖွားမြင်​သော အကြီးဆုံးက​လေးဖြစ်သည်။ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လာပြီး​နောက် ဒူဆစ်နန်းတော်တွင် ​နေထိုင်ခဲ့သည်။ဘွဲ့​တော်အပြည့်အစုံမှာ ဥပ္ပလရတနရာဇကညာ သိရိဝဎနာဝဏ္ဏဝတီ မင်းသမီး (ပါဠိ: Uppalaratanarājakaññā Sirivaḍhanāvaṇṇavatī) ဖြစ်သည်။
၁၉၆၇ ဘန်​ငေါက်ပွဲ​တော်တွင် ဘုရင်ဘူမိဗလနှင့် မင်းသမီးရာတာနာတို့သည် ရွက်​လှေအားကစားနည်းတွင် ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ ရွှေတံဆိပ်များ ရရှိခဲ့သည်။
ဥပ္ပလရတနာသည် ငယ်စဉ်က ချစ်တရာလဒါ​ကျောင်းတွင် ပညာသင်ခဲ့သည်။ထို့​နောက် မက်ဆာချူးဆက် စက်မှုတက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၃ခုနှစ်တွင် သင်္ချာဘာသာရပ်ဖြင့် သိပ္ပံဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။​လော့စ်အိန်ဂျလိရှိ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်တွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာ​ရေးဖြင့် မာစတာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
ဖိုင်:Bhumibol Adulyadej in Kachanaburi (26.10.1963) 05.jpg
မင်းသမီးကို ခမည်း​တော် ဘူမိဗလလုရင်နှင့် ​မောင်​တော် ဝသိလာ​လောင်ကွန်းမင်းသားတို့နှင့်အတူ​ ၁၉၆၃ခုနှစ်ကတွေ့ရစဉ်
၁၉၇၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လ၂၅ရက်​နေ့တွင် သူ၏​တော်ဝင်ဂုဏ်ပုဒ်များကို စွန့်လွှတ်ကာ ပီတာလတ်ဂျန်ဆန်ဖြင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ထို့​နောက် အ​မေရိကန်တွင် ၂၆နှစ်ကြာ​နေထိုင်ခဲ့သည်။၁၉၉၈ခုနှစ်တွင် ကွာရှင်းခဲ့ကာ သူနှင့်က​လေးများမှာ ဆန်ဒီ​ယေဂိုတွင် ၂၀၀၁ခုနှစ်အထိ​နေထိုင်ခဲ့သည်။သူ့တွင် သားတစ်​ယောက်နှင့် သမီးနှစ်​ယောက်ရှိသည်။သူ၏သားမှာ ၂၀၀၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဆူနာမီ​ကြောင့် ​သေဆုံးခဲ့ရသည်။
၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် ယင်လပ်အစိုးရအား အာဏာသိမ်းခဲ့​ပြီး​နောက် ၅နှစ်အကြာတွင် ပထမဆုံးပြန်လည်ကျင်းပမည့် ​ရွေး​​​ကောက်ပွဲတွင် ဝန်ကြီးချုပ်​နေရာအတွက်ဥပ္ပလရတနာမှ ဝင်​ရောက်အ​ရွေးခံမည်ဖြစ်​ကြောင်း ​၂၀၁၉ခုနှစ် ​ဖေ​ဖော်ဝါရီလ၈ရက်​နေ့က ကြေညာခဲ့သည်။ယခင် ဝန်ကြီးချုပ်၂ဦးဖြစ်သူ သက်ဆင် ရှင်နာဝပ်နှင့် ယင်လပ် ရှင်နာဝပ်တို့၏ ရှင်နာဝပ်မိသားစုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည့် ထိုင်းရတ်ဆာချက်ပါတီမှ ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။သူ၏​ကြေညာချက်ထွက်ပြီးမကြာမီတွင် အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရ၏ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူ ပရာယွတ်ချန်အိုချာကလည်း စစ်တပ်​နောက်ခံပါတီမှ ဝန်ကြီးချုပ်​လောင်းအဖြစ် အ​ရွေးခံမည်ဖြစ်​ကြောင်း ​ကြေညာခဲ့ပြန်သည်။ထို့​ကြောင့် စစ်အစိုးရ၏မဟာရန်သူ ရှင်နာဝပ်မိသားစုနှင့်လက်တွဲကာ နိုင်ငံ​ရေားအတွင်းဝင်လာခြင်းဖြစ်၍ စစ်တပ်ပါတီနှင့် ထိပ်တိုက်​တွေ့ဆုံကာ ဗဟိုအာဏာကိုဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ရန် ကြိုးပမ်း​နေ​သော စစ်အစိုးရ၏အစီအစဉ်များကို ကစဉ့်ကလျားဖြစ်​စေသည်။အကယ်၍ ​ရွေး​ကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိပါက ​၁၉၃၂ခုနှစ်​တော်လှန်​ရေးအပြီး စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်မှ တော်ဝင်မိသားစုအတွင်း ပထမဆုံး ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။မင်းသမီးက သူ့အ​နေဖြင့် ​တော်ဝင်အ​ဆောင်အ​ယောင်များကို ၁၉၇၁ခုနှစ်ကပင် စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ယခုအချိန်တွင် သာမန်လူအ​​နေဖြင့်သာ​နေထိုင်​နေ​ကြောင်း လူမှုကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် ​ပြောကြားခဲ့သည်။သို့​သော် ချက်ချင်းပင်လျှင် ​မောင်​တော် ရာမ၁၀ဘုရင်က တော်ဝင်မိသားစုဝင်များ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းသည် “မသင့်တော်”ဘဲ အခြေခံဥပဒေနှင့်လည်း မကိုက်ညီဟု ရုပ်သံမှတဆင့် မိန့်ခွန်းပြောခဲ့သည်။ဘုရင်​သည် အစ်မ​တော်ကို တိုက်ရိုက်​ဝေဖန်လိုခြင်းမရှိဘဲ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည့် နိုင်ငံ​ရေးပါတီကိုသာ ​ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့သည်။နိုင်ငံ​ရေးပါတီမှလည်း ဘုရင်၏ အလိုဆန္ဒပြည့်​စေရမည်ဖြစ်ပြီး ဘုရင့်ဆန္ဒအတိုင်းသာ လုပ်မည်ဖြစ်​ကြောင်း​ပြောခဲ့သည်။​ဖေ​ဖော်ဝါရီ ၁၁ရက်​နေ့တွင် ထိုင်း​ရွေး​ကောက်ပွဲ​ကော်မရှင်က ​တော်ဝင်မိသားစုဝင်များသည် အုပ်ချုပ်​ရေးပိုင်း၏အ​ပေါ်တွင်ရှိရမည်ဖြစ်ကာ နိုင်ငံ​ရေးဆိုင်ရာရာထူးများ ရယူခွင့်မရှိဟုဆိုကာ ပယ်ချခဲ့သည်။
ဥပ္ပလရတနာသည် ၂၀၀၈ခုနှစ် ဩဂုတ်လက ထွက်ရှိခဲ့​သော ထိုင်းရုပ်ရှင် Where The Miracle Happens (หนึ่งใจ..เดียวกัน)တ့င် ပါဝင်သရုပ်​​ဆောင်ခဲ့သည်။  ၂၀၁၀ ​အောက်တိုဘာလတွင်လည်း အ​ကောင်းဆုံးသက်​တော်​စောင့်ရုပ်ရှင် (มายเบสต์บอดีการ์ด)တွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
Ancestors of ဥပ္ပလရတနာ
16. (=18.) မွန်းခတ်
8. (=24.) စုဠာလင်္ကရဏ
4. မဟီတလ အတုလျေတေဇ
18. (=16.) မွန်းခတ်
9. ဆာဗန် ဗဟာနာ
20. ချွမ် ​ချောက်ကရာ​မော်
10. ချူ ချာကရွန်​မော်
5. ဆန်ဝမ် တလပတ်
11. ခမ် ချာကရွန်​မော်
24. (= 8.) စုဠာလင်္ကရဏ
6. နက္ခတြ မင်္ဂလ
7. ဘွား ကီတိယကရ
↑ พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระนาม။ Office of the Prime Minister။6June 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ 'Princess Ubolratana Biography'။
↑ Beech၊ Hannah။ "Thai King’s Sister Is Picked to Run for Prime Minister, Upending Politics" (in en-US)၊ The New York Times၊ 2019-02-08။
↑ Thai princess joins election race to become prime minister in stunning move for 'apolitical' royals (in en) (2019-02-08)။
↑ "Princess Ubolratana: Thai royal to stand as PM candidate"၊ BBC News၊ 8 February 2019။
↑ "ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် တော်ဝင်မင်းသမီး၏ ကြိုးပမ်းမှုကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အရည်အချင်းမပြည့်မီဟု ဆိုကာ ပယ်ချခဲ့"၊ Eleven Media၊ ၁၁ ​ဖေ​ဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉။
↑ :: :: wherethemiraclehappens.com :: ::
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဥပ္ပလရတနာ&oldid=540026" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၃:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။